Caalbaasii Ijaarsa Warshaa Xaa’oo Yaayyoof dhaabbanni tokko qofti dhiyaachuu ibsame – Fana Broadcasting Corporate
Caalbaasii Ijaarsa Warshaa Xaa’oo Yaayyoof dhaabbanni tokko qofti dhiyaachuu ibsame
Finfinnee, Onkololeessa 26, 2012 (FBC) – Ijaarsa warshaa xaa’oo Yaayyoo eegaluuf caalbaasii ba’een dhaabbanni tokko qofti sanada caalbaasii dhiyyeeffachuu Koorporeeshiniin Industirii Keemikaalaa beeksiseera.
Hanga ammaattis dhala liqii qarshii biiliyoona 4 kaffaluu fi waggaa waggaanis dhala liqii birrii biiliyoona 1 fi kuma 592 koorporeeshinichi kaffaluu akka qabu ibsameera.
Koorporeeshinni Industirii Keemikaalatti daayreekteerri qorannoo fi raawwii obbo Daawwit Waalelinyi ijaarsa warshichaaf qarshii biiliyoona 10.6 baankiirraa liqii fudhachuun qarshii biiliyoona 5.6 koorporeeshiniin injinaring sibiilootaaf kaffallamuu himaniiru.
Liqichi erga fudhatamee eegalee hanga ammaatti birriin biiliyoonni 4 ol liqiin kaffalamuu ibsaniiru.
Koorporeeshinichi liqii kaffaluuf humna dhabuu isaatiin yeroo ammaa qarshii miiliyoona 796 idaa of irraa qaba kan jedhan obbo Daawwit, bara 2012tti kaffaltii yeroo 4niin qarshii biiliyoona 1 fi kuma 592 kaffaluu qaba jedhan.
Warshaan Yaayyoo Idaa qofa kaffallee xummuruuf yoo xiqqaate waggaa 11 isa gaafata jedhameera.
Warshaan xaa’oo cileen hojjetu gabaa idila addunyaarratti dorgomaa ta’uuf waggaatti Toonii kuma 600 ol oomishuu qaba jedhameera.
Warshaan Xaa’oo Yaayyoo wagaatti oomishuuf yaade toonii kuma 300 qofa ta’uus ibsameera.
Sababa kanaan warshaan kun gabaa alaa waliin dorgomee bu’aa qabeessa ta’uu akka hindandeenye ifoomaa jira.
Ijaarsa isaa koorporeeshiniin injinaringi sibiilootaa harkaa fuudhuun dhaabbileen dhuunfaa caalbaasiin akka hojjetaniif beeksisa ba’een dhaabbileen 7 fedhii agarsiisaniis isaan keessaa sadi qofti dandeetti kan qaban ta’uu adda bahee jira jedhan obbo Daawwit.
Dhaabbileen sadan haala karoora isaanii,teeknikaa, fi raawwii faayinaansii isaanii koorporeeshinichaaf dhiyyeessuun gamaggamni taasiifamee walii galteen mallattaa’uus guyyaa dhumaa caalbaasichaa dhaabbilee sadan keessaa tokko qofatu sanada caalbaasii dhiyyeeffate jedhameera.
Akka gabaasa Dhaabbata Preesii Ityoophiyaatti seeraa caalbaasii Ityoophiyaatti ammoo dhaabbilee sadii ol ta’uu qaba.
Sababa kanaan adeemsichi seera hin guunne waan ta’eef haala qajeelfamaan hojiitti galuuf rakkisaa ta’aa jiraachuu daayreekteerich himaniiru.
Finfinneetti barattoonni kumni 39 ol Afaan Oromootin barnoota isaanii hordofaa jiru
Hoomaa awwannisaa ittisuuf lafa heektaara kuma 27 ol irratti keemikaalli biiffame
Yuunvarsiitiin Finfinnee Afrikaarraa, sadarkaa 10ffaa argate
Bulchiinsi Finfinnee raawwii karoora waajjiraalee seektarootaa gamaaggamaa jira